Madaxweyne Farmaajo oo ciidan cusub oo tababar u soo xirmay kula dardaarmay in ay dalkooda ka xoreeyaan argagixisada Al-Shabaab - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweyne Farmaajo oo ciidan cusub oo tababar u soo xirmay kula dardaarmay in ay dalkooda ka xoreeyaan argagixisada Al-Shabaab
March 13, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Talaado ah ciidamo gaaraya 600 askari tababar ugu soo xiray xarunta Janaraal Kaahiye ee magaalada Muqdisho.
Farmaajo ayaa ciiadanka cusub oo u badan dhalinyaro kula dardaarmay in ay dalkooda ka xoreeyaan maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab.
“Waxaa halkan iiga muuqata ciidan u diyaarsan in ay dalkooda ka xoreeyaan hororka nabad diidka ah ee Alshabaab oo ah Khawaarij nagu soo duulay, dalkeenna tafaha heysa oo diiday in aan la tartanno caalamka intiisa kale,” ayuu yiri.
January 28, 2018 Madaxweyne Farmaajo oo markii ugu horeysay ka qeybgalay Shir Weynaha Midowga Afrika
Dubai–(Puntland Mirror) Puntland has signed agreement with DP World to develop and manage Bosaso port in Puntand’s commercial town, according to statement from Puntland Presidency. Puntland President President Abdiweli Mohamed Ali and DP World’s chairman [...]
Garowe-(Puntland Mirror) Wasiir dowlihii madaxtooyada dowlada Puntland Maxamed Cabaas Macalim ayaa is-casilay shalay oo Jimce ahayd, isagoo sheegay arrimo isaga u gaar ah in uu isku-casilay. Maxamed Cabaas oo tan iyo 2014-kii kamid ahaa golaha [...]